Oppo nwere ọhụrụ ama-nso ama na aka ya | Gam akporosis
E nwere ndị na-emepụta ama ole na ole na-achọkarị ịnọ na ahịa ahụ na ọtụtụ mmalite nke ọnụ na obere oge dị iche na ibe ha na oge niile na-enye ihe ị ga-ekwu maka ya, ụfọdụ ihe atụ ndị a bụ Xiaomi, Samsung, Huawei na Oppo.
Companylọ ọrụ a a kpọtụrụ aha ikpeazụ na-akwadebe atọ ọhụrụ Oppo Reno 2 ekwentị ụdị, ma ọ bụghị naanị ndị a, kamakwa nye onye ọzọ ngwaọrụ nke gara ije n'oge na-adịbeghị anya site na Geekbench iji tụọ ike ya ma kpughee ụfọdụ nkọwapụta ọrụaka ya; nke a na-ekwu na ọ nwere ike ịbụ akụkụ nke usoro Reno 2, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe nwere ike ọ gaghị adị ka nke ahụ na njedebe.
A na - akpọ aha ọhụrụ aha e debara aha na ebe nchekwa data Geekbench nyocha n'okpuru koodu 'Oppo PCKM00'. O doro anya na nke a abụghị aha azụmaahịa nke ngwaọrụ a ga - eme ka ọ bụrụ ọkwa na ahịa ma emechaa: n'ihi nke a anyị amaghị ma ọ bụrụ asịrị na ọ nwere ike ịbụ akụkụ nke ezinụlọ Reno 2 bụ eziokwu; emesia anyị ga akwado ma ọ bụ gọnarị ya, mana, ugbu a, anyị nwere ike ilekwasị anya n’ihe anyị nwere n’aka.
Dabere na ihe Geekbench kọwara n'ụzọ zuru ezu na ndepụta edepụtara na nso nso a, Oppo a na-amaghị ama na-abịa na sistemụ arụmọrụ gam akporo, nke bụrịrị iwu na smartphones ọhụrụ agbakwunyere. Tụkwasị na nke a, ọ dị ka anyị na-eche ihu n'etiti etiti dị ike, ebe ọ bụ na ebe nchekwa RAM nke a bụ 8 GB na isi ugboro nke ikpo okwu mkpanaka nke ejiri nyochaa ya bụ 1.80 GHz, nke nwere ike ịbụ Snapdragon 665 site na Qualcomm.
Anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara ngwaọrụ a, mana ụbọchị ole na ole sochirinụ, anyị nwere ike ịnakọta ozi ndị ọzọ gbasara ya iji gosipụta ihe ụlọ ọrụ ahụ kwadebeere anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo nwere ama ọhụrụ na aka ya, nke a agafewọrịrị site na Geekbench